Bogga ugu weyn Waa Kuwee Kuwa Ugu Sarreeya Bixiyaasha Biyaha? | Dalalka ugu sarreeya 2022 -ka
Waqtiyada casriga ah, shaqooyinka xirfadda leh sida alxanka ayaa lagu dayacaa inta badan adduunka.
Shaqooyinka guud ee xafiisyada ayaa ahaa damaca xilligan xaadirka ah sababta oo ah jawiga shaqada ee soo jiidashada leh, oo ka qarsoon aqoontooda inta badan waxay kasbadaan wax ka yar kuwa alxanka.
Alxanka waa la kala duwan yahay, noocyada alxanka biyaha hoostooda ayaa ah kuwa ugu mushaharka badan ka hor dabeecadda daallan. Waldaha biyaha hoostooda mara ee ka yimaada dalal gaar ah ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu mushaharka badan alxanka biyaha hoostooda.
Alxanka biyaha hoostooda waa habka alxanka cadaadiska sare, sida caadiga ah biyaha hoostooda. Alxanka Hyperbaric ayaa dhici kara qoyan biyaha dhexdiisa ama ku qallajiya gudaha xayndaab cadaadis togan oo si gaar ah loo dhisay sidaas darteedna jawi qallalan.
Waxaa inta badan loogu yeeraa “alxanka hyperbaric” marka loo isticmaalo jawi engegan, iyo “alxanka biyaha hoostooda”Marka la joogo jawi qoyan.
Waa maxay Alxanka Biyaha hoostiisa?
Alxanka biyaha hoostooda, oo inta badan loogu yeero alxanka hyperbaric, wuxuu jiray ilaa horraantii 1930 -meeyadii welina waxaa lagu qabtaa meelo badan oo adduunka ah si loo dayactiro loona dayactiro kaabayaasha badda oo qayb ahaan ama si buuxda u hoosta biyaha.
Waldeyaasha gudaha waxay ka shaqeeyaan buundooyinka, biyo -xireennada, iyo maraakiibta biyaha ee yar -yar halka alxanka badaha ay gacanta ku hayaan dhuumaha, haamaha saliidda, maraakiibta waaweyn, deegaannada biyaha hoostooda mara, iyo xitaa xarumaha tamarta nukliyeerka.
Alxanka biyaha hoostooda runtii kama duwana alxanka dhulka engegan. Labaduba waxay adeegsadaan farsamooyin iyo qalab alxanka aasaasiga ah oo isku mid ah, taas oo ah sababta welders -ka biyaha hoostooda sida caadiga ah u tababaraan si ay marka hore u noqdaan alxanleyaal shahaado ka sarreeya. Tani waa waxa iyaga dhigaysa inay ka mid noqdaan kuwa ugu mushaharka badan.
Si kastaba ha ahaatee, waa goob shaqo oo khatar ah oo ku lug leh tababarro sannado ah si aan loo helin aqoonta iyo xirfadaha loo baahan yahay oo kaliya ee sidoo kale loo helo shahaadadda lagama maarmaanka ah.
Baadhid: 10 -ka Dhakhtar Ee Ugu Mushaharka Badan Caalamka | 2022
BIYAHA BIYUHU WAA U QALMAN YIHIIN?
Sababtoo ah hanjabaadaha ku xeeran, sida qaraxyada, shoogga korontada, iyo qarqidda, waxaa laga yaabaa inaan loo tixgelin mid ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn marka la eego xaaladaha shaqada iyo baahiyaha.
Waa shaqo aad u fiican kuwa doonaya inay mushahar sare ku sameeyaan wakhti kooban. Kahor mushaharka badan ee ku lifaaqan shaqada, waxaa mudan in la qaato halista maxaa yeelay nolosha lafteeda ayaa halis ah.
Sidoo kale, waxay siinaysaa boos iyo safarro inta ugu badan ee aad shaqada ku jirto. Dabeecadda shaqada ka shaqaysa biyaha kuma koobna meel gaar ah ee waa adduunka oo dhan
Xirfad kastaa waxay leedahay faaiidooyin iyo waxyeello, ma jiro nidaam kaamil ah oo ka jira adduunka aan ku jirno.
Arag sidoo kale: Rinjiyeynta ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka ugu qaalisan sanadka 2022
WELDERS -KA BIYAHA BIYOOW MAXAY SAMEEEN?
Hawlgallada alxanka ayaa aad muhiim ugu noqday ku dhawaad ​​dhammaan warshadaha wax -soo -saarka iyo dalabka qaab -dhismeedka.
In kasta oo ay jiraan farsamooyin badan oo loogu talagalay alxanka jawiga, qaar badan oo ka mid ahi waxtar kuma laha codsiyada badda iyo badda halkaas oo joogitaanka biyuhu ay tahay walaaca ugu muhiimsan.
Marka la eego arrintan, waxaa xusid mudan in hawsha dayactirka iyo dusha sare ee dhulka intiisa badan lagu sameeyo si qotodheer, aagga buufinta, oo ay si aan kala go 'lahayn biyuhu u daboolaan.
In kasta oo inta badan dayactirka markabka iyo hababka alxanka lagu sameeyo qoto dheer, haddana waxaa la sameeyaa tiro ahaan. Hawsha ugu adag ee xagga farsamada ah ayaa ah dayactirka qotada dheer, gaar ahaan dhuumaha iyo dayactirka shilka shilka.
Faa'iidooyinka alxanka biyaha hoostooda ayaa aad u weyn oo dabeecad dhaqaale ah sababta oo ah alxanka biyaha hoostooda ee dayactirka badda iyo shaqooyinka dayactirka ayaa dhaafaya baahida loo qabo in dhismaha laga soo saaro badda oo la badbaadiyo waqti qiimo leh iyo kharashaadka ku soo xiridda qallalan.
Sidoo kale waa farsamo muhiim u ah dayactirka degdegga ah. Waxay u oggolaanaysaa qaab -dhismeedka burburay in si ammaan ah loogu geeyo tas -hiilaadka qalalan si loogu sameeyo dayactir joogto ah ama xoqid.
Alxanka biyaha hoostooda waxaa lagu dabaqaa deegaannada gudaha iyo dibaddaba, in kasta oo cimilada xilliyeed ay horjoogsato alxanka badda hoosteeda xilliga jiilaalka. Labada gooboodba, hawo dhulka la keenay ayaa ah habka ugu quusitaanka badan ee alxamayaasha biyaha hoostooda.
Baadhid: 15ka kooxood ee ugu mushaarka badan Isboortiga 2022
Alxanka qallalan ee qallalan wuxuu ku lug leeyahay alxanka lagu sameeyo cadaadiska sare ee qol ay ka buuxaan gaas isku dar ah oo lagu shaabadeeyey dhismaha la alxamay.
Inta badan hababka alxanka arc sida alxanka birta gaashaaman (SMAW), alxanka arc core flux (FCAW), alxanka tungsen arc alxanka (GTAW), alxanka birta gaaska gaaska (GMAW), alxanka arc plasma (PAW) ayaa lagu hawlgelin karaa cadaadiska hyperbaric , laakiin dhammaantood way xanuunsadaan marka cadaadisku kordho.
Alxanka gaaska tungsen ayaa inta badan la isticmaalaa. Hoos -u -dhaca wuxuu la xiriiraa isbeddellada jireed ee arc -ka iyadoo nidaamka socodka gaaska ee agagaarka arc -ka uu is -beddelo oo xididdada arc -ku ay qandaraas noqdaan oo ay noqdaan kuwo guurguura.
Waxaa xusid mudan koror aad u weyn oo danab arc ah kaas oo la xiriira kororka cadaadiska. Hoosudhaca guud ee kartida iyo hufnaanta ayaa ka dhasha cadaadiska oo kordha.
Farsamooyin kontorool oo gaar ah ayaa la adeegsaday kuwaas oo oggolaaday in alxanka hoos loo dhigo ilaa 2,500 m (8,200 ft) si qoto dheer loo simay biyaha shaybaarka.
Laakiin alxanka qallalan ee qallalan ayaa illaa hadda xaddidan hawlgal ahaan in ka yar 400 m (1,300 ft) qoto dheer oo biyo ah oo leh awoodda nafsaaniga ah ee noocyada kala duwan si ay ugu shaqeeyaan qalabka alxanka cadaadis sare iyo tixgelinno wax ku ool ah oo ku saabsan dhismaha cadaadis/qolka alxanka otomaatig qoto dheer .
XIDHIIDHKA: Sida Fudud looga helo W-2 Loo-shaqeeyayaashii hore
Arag sidoo kale: 10ka shirkadood ee ugu mushaarka badan MLM ee 2022
qoyan alxanka biyaha hoostooda wuxuu si toos ah ugu soo bandhigayaa quusaha iyo korontada biyaha iyo walxaha ku xeeran. Kala -duwayaasha ayaa sida caadiga ah adeegsada qiyaastii 300-400 amps oo ah koronto toos ah si ay awood ugu yeeshaan korontohooda, waxayna ku alxamaan iyagoo adeegsanaya qaabab kala duwan oo alxanka arc.
Dhaqankaani wuxuu caadi ahaan adeegsadaa kala -duwanaanta alxanka qaansada birta gaashaaman, isagoo adeegsanaya koronto -biyood aan biyuhu lahayn. Hababka kale ee la isticmaalo waxaa ka mid ah alxanka arc-cored-ka iyo alxanka khilaaf.
Awoodda alxanka waxay ku xiran tahay qalabka alxanka mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinkan iyada oo loo marayo fiilooyin iyo tuubooyin. Sababtoo ah dildilaaca hydrogen-sababtay, habku wuxuu inta badan ku kooban yahay bir u dhiganta kaarboonka hooseeya, gaar ahaan qoto dheer.
Alxanka qoyan oo leh koronto koronto ayaa adeegsata qalab isku mid ah si loo qallajiyo alxanka, laakiin kuwa korontada haysta ayaa si weyn u dahaaran oo loogu talagalay qaboojinta biyaha. Way kululaan doonaan haddii biyaha laga isticmaalo.
Alxanka qaanso -gacmeedka birta waxaa lagu sameeyaa mashiinka alxanka ee joogtada ah. Xilliga tooska ah ayaa la shaqaaleeyaa, iyo meesha koontaroolka dusha sare, bilaawga go'doominta culus ee culus ayaa lagu rakibay fiilada alxanka si marka dambe alxanka loo gooyo marka aan la isticmaalin.
Alxanka ayaa ku amraya hawlwadeenka dusha in uu sameeyo oo jebiyo xiriirka sida loo baahdo inta lagu guda jiro hawsha. Xir xiriirada oo kaliya inta aad alxanka sameyneyso, oo fur waqtiyada kale oo dhan, gaar ahaan marka aad beddesho electrodes.
Qalabka shaqada iyo usha alxanka waxaa kululeeya korantada korontada, biraha dhalaalayna waxaa lagu gudbiyaa xumbo gaas oo ku wareegsan arc. Xumbada gaaska waxaa qayb ahaan abuuray abuurka nabaad -guurka dheecaanka korontada, inkasta oo uu inta badan ku sumoobo uumi.
Socodka hadda socdaa wuxuu keenaa wareejinta dhibcaha biraha ee korontada oo loo wareejiyo goobta shaqada waxayna awood u siisaa alxanka meelaynta shaqaale xirfad leh. Ku -shubidda dusha sare ee alxanka waxay ka caawisaa inay hoos u dhigto heerka qaboojinta, laakiin qaboojinta deg -degga ah waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo -saarka alxanka tayada leh.
Arag sidoo kale: 10 Professor -ka Kulliyadaha ugu Mushaharka Badan Maraykanka 2022
INTEE AYEEY WELDER -KA BIYAHA BIYOODU SAMEEEN?
Waxaad na siisaa liiska shaqooyinka si isku mid ah u xiiso iyo lacag badan. Waxaan qiyaasayaa inaad dhib ku qabtid helitaanka shaqooyin tiro badan oo ku habboon halbeeggan.
Bal qiyaas waxa! Alxanka biyaha hoostooda waa shaqo noocaas ah.
Heerka sare wuxuu ku xiran yahay xirfadahaaga iyo khibradaada. Waxay kaloo ku xiran tahay nooca alxanka biyaha hoostooda iyo boqortooyada mashaariicda.
Khibrad shaqo oo noocan ah, alxanka biyaha hoostooda ayaa u horseedi kara shaqooyin la taliyeyaal iyo jagooyin maamul oo ku saabsan shirkadaha waaweyn ee gaaska iyo shidaalka, taas oo iyaduna siisa abaalmarin la hagaajiyay.
Inta badan celcelis ahaan, waxay ka helaan qiime saacad ah $ 1 ilaa $ 35 saacaddii. Hagaag, biyaha hoostiisa alxanka ku kasban karaa saacad ama mashruuca. Aynu nidhaahno waxaad tahay alxanka biyaha hoostooda oo shaqeeya $ 30 saacaddii.
Hadda, haddii aad shaqeyso 8 saacadood a maalintii, markaa waa $ 250 halkii maalintii. Qiyaasta mushaharka toddobaadlaha ee alxanka biyaha hoostooda wuxuu u dhexeeyaa $ 1,200 illaa $ 1,600. Mushaharka billaha ah ee alxanka biyaha hoostooda ayaa u dhexeeya $ 6,000 ilaa $ 10,000.
Qiyaasta mushaharka sannadlaha ah ee alxanka biyaha hoostooda ayaa u dhexeeya $ 50,000 ilaa $ 300,000.
Arag sidoo kale: 10 -ka Duuliye ee Diyaaradaha Diyaaradaha ugu Mushaharka Badan | 2022
WAA MAXAY J0BSKA UGU WANAAGSAN WELDERKA BIYOOD?
Halkaan waxaa ah shaqooyinka ugu wanaagsan ee loogu talagalay alxannada biyaha hoostooda ugu mushaarka badan:
Alxanleyda Rig waxay ku saabsan yihiin alxanleyaasha ugu mushaharka badan adduunka. Waxay shaqeeyaan saacado dheer oo dhib badan waxayna haystaan ​​tacliinta iyo shahaadooyinka ugu horumarsan.
Haddii ay khalad sameeyaan, waxay noqon doontaa masiibo, markaa shirkaduhu waxay shaqaaleeyaan kaliya kuwa ugu fiican kuwa ugu fiican. Waxaad u baahan doontaa waayo -aragnimo sannado ah iyo shahaadooyin badan ka hor inta aysan shirkaduhu xitaa kuugu tixgelin shaqada.
Aldeyaasha alwaaxa ayaa inta badan la filayaa inay ku sameeyaan alxanka biyaha hoostooda, alxanka hyperbaric, iyo alxanka dhammaan noocyada kala duwan ee saliidaha badda ee badda.
Qaar ka mid ah alxamayaasha riiggu waxaa laga yaabaa in maalin walba loo soo raro oo laga soo qaado goobtooda shaqada. Waxay u badan tahay, in aad ku noolaan doontid qalabka aad ku shaqayso muddo dheer, oo aad shaqaynayso 12 saacadood, maalin kasta toddobaadka.
Tani waxay socon kartaa toddobaadyo ama bilo markiiba, laakiin waa qayb weyn oo ka mid ah sababta ay welders -ka ku shaqaystaan ​​mushahar aan caadi ahayn sida $ 52,000 - $ 207,000 sanadkii.
Kormeeraha Hubinta Tayada
Dayactirka maraakiibta iyo maraakiibta badda waxay noqon kartaa shaqo heer-gelitaan oo weyn, laakiin ka-qalin-jabinta kormeerku waxay noqon doontaa shaqada ugu xasilloon oo dhaqaale ahaan waxtar leh.
Kormeeraha Hubinta Tayada, waxaa jira hawlo fara badan oo kala duwan oo aad qaban karto, laakiin dhammaantood waxay ku hoos dhacaan hal shay oo aad u shaqeyneyso sida indhaha, dhegaha, iyo kabaha dhulka hoostiisa sare ee shirkadda.
Waxay rabaan inay hubiyaan in wax walba si habsami leh u socdaan adiguna waxaad mas'uul ka tahay hubinta hawlahooda liiska.
Masuuliyadaha waxaa ka mid noqon kara samaynta tijaabada biyo -mareenka ee haamaha, kormeerida rudders -ka iyo keydka maraakiibta marka la rakibo kama -dambaysta, iyo hubinta tayada, isku -halaynta, ku -tiirsanaanta, iyo badbaadada dhammaan dayactirka biyaha hoostooda.
Sababtoo ah mihnaddan ayaa leh mas'uuliyado kala duwan, dakhliga saacadlaha ah wuxuu gaari karaa waqooyiga $ 70,000 sanadkii marka aad xisaabiso in ka badan sannad dhan, laakiin tani maahan kiiska qalin -jabiyaha cusub.
XIDHIIDHKA: 10ka Goobood ee ugu Wanaagsan ee lagu Iibsado Taageerayaasha Instagram
Waxaa jira waajibaadyo maareyn, waajibaadyo maamul, iyo in ka badan oo u baahan waayo -aragnimo sannado badan oo duurka ah ka hor intaadan codsan mid ka mid ah shaqooyinkan.
Kormeeraha Alxanka La Xaqiijiyay
Kormeere alxanka oo shahaado haysta, waxaa laga yaabaa inaadan samaynayn wax badan oo ah alxanka dhabta ah. Laakiin waxaad u baahan doontaa inaad si fiican u fahamto mid ka mid ah alxanleyaasha shirkaddaada maadaama aad mas'uul ka noqon doontid hubinta in wax kasta oo ay samaynayaan ay gaarsiisan yihiin heer.
Waxaad u baahan doontaa inaad isha ku hayso qiimayaasha kulaylka, hubi in dhammaan alxanka ay raacaan xeerarka u hoggaansanaanta iyo amniga, oo hubi in dhammaan hababka loo dhammaystiray heer lagu qanco.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad taqaano oo aad fahamto tilmaamaha hab kasta oo alxanka. Kahor intaadan xitaa qaadan imtixaanka si aad u hesho shahaado, waxaad u baahan doontaa saddex sano oo waayo -aragnimo alxanka ah.
Mushaharka sanadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa $ 42,000 - $ 104,000.
Khabiirka Dayactirka Dhirta Nukliyeerka
Ka shaqaynta warshadaha nukliyeerka waa xoogaa jawi ka sii halis badan laakiin dhaqaale ahaan abaalmarin badan leh.
Khabiirada Dayactirka Warshada Nukliyeerka ah ayaa caadi ahaan ah ciidan hore ama quusayaal khibrad leh waxayna amri karaan mushaharka $60,000 ama in ka badan sanadkii marka aad qorsheyso qiimaha saacadiiba sanadka.
Waxaad bedeli doontaa qaybaha waaweyn ee dhirta nukliyeerka sida koronto dhaliyayaasha uumiga, madaxa xidhitaanka maraakiibta reactor, iyo cadaadisayayaasha. Waxa kale oo aad samayn doontaa dayactirka alxanka iyo mashiinada takhasuska leh ee nidaamka waaweyn iyo kuwa sare ee warshadda, sida EDM biyaha hoostooda iyo qalabyada fogfog.
Pipefitter -ka Badda
Warshadaha saliidda iyo gaasku waa deeq -bixiye aad u weyn oo ku shaqeeya alxanka biyaha hoostooda iyo noocyada kala duwan ee ganacsiga waxayna u badan tahay inay noqon doonto meesha aad ka shaqaynayso shaqadaada ugu horreysa isla marka aad ka baxdo Machadka Farsamada CDA ee Machadka Farsamaynta Ganacsiga.
In kasta oo ay run tahay in biibiilayaasha badda badiyaa ay yihiin shaqooyin heer-galitaan ah, shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan ku dhawaad ​​$ 60,000 sanadkiiba noocyo kala duwan oo aqoon leh.
Waa inaad aqoon iyo faham u leedahay nidaamyada tuubooyinka maraakiibta (oo ay ku jiraan dayactirka iyo habdhaqanka rakibidda).
Sidoo kale waa hab aad u fiican oo cagtaada lagu gelin karo albaabka warshadaha alxanka ee biyaha hoostooda adiga oo samaynaya oo rakibaya qalabyo casri ah, jigooyin, taageerooyin iyo bartilmaameedyo si loo hubiyo toosinta saxda ah inta lagu jiro habka alxanka.
WAA MAXAY DALKA UGU SAREEYA BIXINTA WELDER -KA BIYO?
Sababtoo ah naadirnimadeeda, xirfadda waxaa lagu dhaqmaa oo keliya dhowr waddan. Waddan walba wuxuu kala bar ka dhigaa mushaharka la siiyo xirfadleyda.
Maraykanku wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee xirfadlayaal ah iyo xarumaha tababarka ugu fiican ee khubarada biyaha hoostooda jooga.
Waxaa sidoo kale loo arkaa inay tahay waddanka ugu lacagta badan ee la siiyo khabiirada fuliya waajibaadka biyaha hoostooda.
Mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 50,000 ilaa $ 300,000 sanadkii.
#2. Boqortooyada Ingiriiska:
Halkan mushaharka gudaha waa 50,000 GBP, mushaharka baddu waa celcelis ahaan sanadkii 67,000 GBP.
Australia gudaheeda, mushaharka gudaha waa 65,000 AUD, mushaharka dibadduna waa 180,000 AUD.
Halka, New Zealand, mushaharka gudaha uu yahay 65,000 NZD mushaharka baddana uu yahay 135,000 NZD.
Sannadkii 1932 -kii farsamayaqaankii Ruushka, Konstantin Khrenov wuxuu ikhtiraacay alxanka biyaha hoostooda. Waxaa lagu tilmaamaa asalka alxanka biyaha hoostooda. Mushaharka sanadlaha ah waa 3,600,500 RUB iyo wixii ka sarreeya iyadoo ku xiran heerka khibradda.
Khibrad ballaaran u leh shaqada farsamo ee biyaha hoostooda ee wax kasta oo kakan, oo ay ku jiraan kormeerka markabka, nadiifinta, iyo dayactirka, kormeerka iyo dayactirka dhismayaasha haydarooliga, bixinta markabka, iyo wixii la mid ah.
Mushaharka sanadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa 1,400,000 UAH iyo wixii ka sareeya iyadoo ku xiran khibradda iyo waayo -aragnimada.
WADAHA DARYEELKA WELDER BIYOOD
Doorashada xirfad ahaan sida alxanka biyaha hoostooda wuxuu ku siin karaa fursad aad ku dabaqdo xirfadaha la raadinayo jawi gaar ah oo xiiso leh.
#1. Hesho Dibloomada Dugsiga Sare ama GED
Tallaabada ugu horreysa ee waddada lagu maro welwelka biyaha hoostooda waa in la dhammaystiro heerka aasaasiga ah ee waxbarashadaada. Loo -shaqeeyayaasha badankoodu waxay filayaan inay arkaan ugu yaraan dibloomada dugsiga sare, laakiin waxaad kaloo heli kartaa GED -kaaga haddii aad ku soo noqonayso dugsiga maqnaansho kadib.
Inaad haysato shahaadada kulliyadda muhiim ma aha inaad u shaqaysid alxanka biyaha hoostooda, laakiin waxay kaa caawin kartaa inaad ka soocnaato xirfadlayaasha kale marka ay timaado waqtigii aad bilaabi lahayd shaqo raadinta.
Ka dib markaad daryeesho shuruudaha waxbarashadaada, sugitaanka shaqadu waxay inta badan noqon doontaa arrin kor u qaadida aqoonsiyada iyo khibrada ku habboon.
#2. Hel Shahaado sida Alxanka Sare
Ka raadi tababar rasmi ah mid ka mid ah dhowr hababka alxanka ee shaqsiyeed iyada oo loo marayo dugsi alxanka la aqoonsan yahay.
Haddii aad ku nooshahay Mareykanka, waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka ah inaad dhammaystirto barnaamijka Welder Certified ee ay bixiso Ururka Welding Society (AWS). Waxaa lagu siin doonaa shahaadadaada ka dib markaad ku gudubto imtixaan qoraal ah iyo mid gacan-ku-hayn ah labadaba.
Baaritaan deg deg ah ku samee internetka si aad u hesho iskuulada alxanka ama barnaamijyada tababarka ee agagaarkaaga.
Waxay qaadan kartaa 7-24 bilood in la dhammaystiro tababarkaaga alxanka iyo shahaadaynta, taas oo ku xidhan dugsiga ama barnaamijka aad doorato.
#3. Hel dhawr sano oo waayo -aragnimo ah oo u shaqeeya sidii alxanka dusha sare
In kasta oo ay farsamo ahaan suurtogal tahay in shaqo laga helo alxanka biyaha hoostooda oo albaabka ka baxsan, haysashada 2 sano ama ka badan oo waayo -aragnimo toos ah ayaa si weyn u hagaajin doonta fursadahaaga.
XIDHIIDHKA: 21 Arrimood oo Xiiso leh oo Saaxiibbada lala Sameeyo Mar Walba
Tani waxay u cadayn doontaa loo -shaqeeyayaasha inaad ku taqaan farsamooyinka alxanka iyo hababka badbaadada dhulka qalalan, oo aad diyaar u tahay inaad ku dabaqdo goob biyood.
Khibrad badan oo aad u leedahay alxanka dusha, ayay u badan tahay in laguu tixgeliyo mashaariicda biyaha hoostooda.
#4. Qaado oo dhaaf jimicsi hordhac ah
Xaaladaha badankood, waxaad iska qori kartaa jir ahaan isla hay'ad bixisa shahaadada quusitaanka ganacsiga ee aad raadineyso. Iyada oo ay weheliso baaritaan madax-ilaa-lugo ah, waxaa sidoo kale lagaa baari doonaa kartidaada dabaasha iyo qaboojinta wadnaha.
Ku haysashada maandooriye, aalkolo, ama cudur faafa ee nidaamkaaga ayaa ku filan inay si ku -meelgaar ah kaaga reebto inaad hesho shahaadada kala -wareejinta ganacsiga. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa inaad dib u soo ceshato jirka marka aad ka nadiifiso walaxda dambiga leh.
Haddii aad muujisid astaamaha neefta, claustrophobia, jirrada dhaqdhaqaaqa daran, sambabada oo duntay, arrhythmia wadnaha, ama wadne -istaag, waxaa laga yaabaa in laguu diido shahaado si joogto ah.
Xitaa haddii dugsiga quusitaanka ee aad damacsan tahay inaad dhigato uusan u baahnayn mid, waa inaad heshaa quusitaan jireed ka hor intaadan bilaabin. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato inaad naafo tahay oo kaa hor istaagaysa inaad sii wadato xirfad ahaan alxanka biyaha hoostooda.
#5. Noqo quuste ganacsi oo la aqoonsan yahay
Isku qor dugsiga tacliinta quusitaanka ganacsiga ee gobolkaaga ama taritorigaaga oo ka shaqee barnaamijka tababarka.
Muddada barnaamijyadani way kala duwan yihiin, laakiin badidooda waxaa loo qoondeeyay in lagu dhammeeyo 5-6 bilood, ama qiyaastii 900 saacadood oo tababar ah.
Markaad dhammaystirto barnaamijka, waxaad heli doontaa shahaado quseeye ganacsi oo ansax ah oo warshadu aqoonsan tahay.
Dhowr ka mid ah akadeemiyadaha quusidda ganacsiga ee caanka ah waxaa ka mid ah Ururka Machadka Heerarka Qaranka ee Macallinka Quusitaanka Ganacsiga (ANSI/ACDE), Ururka Qandaraasleyaasha Quusitaanka Caalamiga ah (ADCI), iyo Diver's Academy International.
Kahor inta aan la gelin barnaamij gaar ah, dhowr machadyo quusitaan oo ganacsi ayaa u baahan codsadayaasha inay dhammaystiraan imtixaanka gelitaanka qoraalka iyo jirka quusitaanka.
#6. Tag dugsiga alxanka biyaha hoostooda
Tani waa halka aad isugu keeni doontid 2 -da xirfadood ee aad dhawaan heshay, alxanka, iyo quusitaanka ganacsiga.
Barnaamijyada alxanka biyaha hoostooda way ku kala duwan yihiin nuxurka iyo dhererka, laakiin badankood waxaa ku jira daraasad dhaqameed iyo barashada gacmaha ee kartida alxanka qoyan, waxayna socon kartaa meel kasta laga bilaabo lix bilood illaa laba sano.
Si loogu oggolaado shahaado-siinta, dugsiyada badankood waxay kaaga baahan doonaan inaad gasho tiro gaar ah oo ah saacadaha quusitaanka (sida caadiga ah 20-50) marka lagu daro barashada fasalka.
Dugsiyada alxanka biyaha hoostooda waxay u badan yihiin inay ku yaalliin magaalooyinka xuduudda u ah biyaha waaweyn ee leh kalluumeysiga, gaadiidka, iyo warshadaha qodista.
#7. Codso booska quusitaanka quusitaanka si aad u sii wadato tababarkaaga shaqada.
Inta badan alxanka biyaha hoostooda kama bilaabaan jagooyin heer sare ah. Taa bedelkeeda, waxay ku bilaabayaan sidii “hindisooyin quusitaan” ah, tababbarayaal gargaar siiya xirfadlayaal khibrad leh inta lagu jiro quusitaanka.
U soo gudbi resumeygaaga, ku buuxi aqoonsi -yaqaankaaga cusub, shirkadda aad dooratay si aad ugu darto magacaaga xirmooyinka shaqaalaynta ee suurtogalka ah.
Shirkadaha dhismaha xeebaha, shirkadaha injineernimada, kuwa dhisa maraakiibta, iyo kooxaha badbaadinta biyaha hoostooda ayaa ah qaar ka mid ah qandaraaslayaasha la shaqeeya alxanka biyaha hoostooda.
Baadh siyaasadaha iyo habraacyada u gaarka ah shirkadda alxanka biyaha ee aad rabto inaad u shaqayso oo aad u tababarto tilmaamahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku qabato heerkaaga ugu sarreeya sidii hindise quusin.
Sii wad hagaajinta xirfadahaaga si aad ugu hormariso goobtaada.
Qalabka aad u baahan tahay si aad ugu guulaysato sida alxanka biyaha hoostooda way kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran shirkadda aad u shaqayso, nooca shaqada ay qabtaan, iyo heerarka warshadaha maxalliga ah.
Goynta, ku -shubista, iyo ku -habboonaanta qaybaha birta, abuurista qorshayaal iyo heerar naqshadeyn, iyo tijaabinta iyo kormeeridda badeecadaha la dhammaystiray ayaa ah qaar ka mid ah hibooyinka ugu muhiimsan ee la heli karo.
Qaar ka mid ah kuwa wel-weliya ayaa sidoo kale si aad ah ugu tababara fiidiyaha biyaha hoostooda iyo sawir qaadista si ay u diiwaangeliyaan horumarka mashaariicda muhiimka ah.
Aqoonta loogu talagalay alxamayaasha biyaha hoostooda way ku kala duwanaan karaan ma aha oo kaliya shirkad ilaa shirkad, laakiin hal mashruuc ilaa ta xigta.
Alxanka biyaha hoostooda wuxuu ka mid ahaa shaqooyinkii ugu halista badnaa ee la soo dhaafay, laakiin horumarka farsamada ee warshadaha ee dhawaanahan ayaa shaqadii ka dhigay mid aad u nabdoon oo fudud.
Alxanka biyaha hoostooda waa shaqo adag, jidh ahaan, iyo maskax ahaanba caqabad ku ah oo ay yar yihiin in la soo waco. Maaddaama dalabka gaadiidka iyo tamarta ay sii kordhayaan, alxanka biyaha hoostooda ayaa sii ahaan doona xirfad caan ah.
Noocyada biyaha hoostooda ku jira ayaa sii wadi doona in ay u baahdaan shirkadaha adduunka oo dhan ilaa robots aad u sarreeya iyo qalab otomaatig ah ay qaban karaan hawlo u baahan heerka ugu sarreeya ee khibradda, dabacsanaanta, iyo waxqabadka.
Illaa iyo hadda, waxaan sahaminnay dhammaan dhulalka alxanka biyaha hoostooda. Waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha shaqadan u rogaya shaqo mushaar badan leh oo xiiso leh. Waxaan sahaminay waddada xirfadda ee alxanka biyaha hoostooda.
Ugu dambayn, waxaan jeclaan lahayn inaan ku celino hal shay. Alxanka biyaha hoostooda ma laha waddo gaaban. Waa inaad mar walba ka shaqaysaa korkaaga.
Si kastaba ha ahaatee, mushaharka alxanka biyaha hoostiisa weli waa mid faa'ido leh. Oo haddii aad u aragto mid xiiso leh, ka dibna tijaabi.
Rinjiyeynta ugu Lacagta Badan Adduunka | 10ka ugu qaalisan sanadka 2022
10 -ka Dhakhtar Ee Ugu Mushaharka Badan Caalamka | 2022
10ka Qaab ee ugu Wanaagsan ee Looga Iibiyo Faraantiga Ka Qaybgalka
10-ka Soo-saare ee ugu Fiican Guriga 2022
Suuqa soo-saareyaasha guryaha ayaa kor u dhaafay USD 4.5 bilyan sanadka 2020, iyo rakibida sanadlaha ah ayaa la filayaa inay dhaafto 1.7…
Buugaag elektiroonig ah ayaa keenay baahida loo qabo in la yeesho akhriste ebook. Isku day inaad ka raadiso google midkood...
Immisa ayay ku kacaysaa in lagu xayeysiiyo khadka?
Goob kasta oo internetka ah oo xayeysiis ah waxay leedahay awoodeeda iyo meelaha ay ku liidato, waxaana jira daraasiin qaab xayeysiis ah, olole…
15 Shabakadaha Madadaalada Ugu Fiican ee Bilaashka ah ee 2022
Naqshadeynta shay dhar ma aha hawl yar - waxay u baahan tahay dadaal maskaxeed oo badan. Isagoo fulinaya…